Aasaasaha Brownbody Deneane Richburg
Aasaaska Abuur "Farshaxan Waqtigan xaadirka ah" ee lagu taageerayo Fannaaniinta BIPOC
Hindisaha ayaa lagu doonayaa in lagu kordhiyo codadka iyo waaya-aragnimada fanaaniinta reer Minnesota iyadoo toosh lagu saarey muusikadooda, dhaantadooda, iyo farshaxanka muuqaalka leh.
The Saint Paul & Minnesota Foundation, oo ay iskaashanayaan Machadka McKnight, ayaa ku dhawaaqay "Farshaxanka xilligan xaadirka ah," oo ah dadaal lagu taageerayo laguna dabaaldegayo fanaaniinta reer Minnesota ee shaqadoodu wax ka qabato arrimaha bulshada, gaar ahaan kuwa ku habboon xilligan la joogo. Shaqadooda waxaa lagu soo bandhigi doonaa websaydhka aasaasiga horraantii Oktoobar.
Iyada oo ujeedadu tahay in tooshka loo saaro muujinta farshaxanka, Foundation iyo McKnight Foundation waxay maalgashi ku samaynayaan fanaaniinta reer Minnesota ee u aqoonsada inay yihiin Madow, Asal ahaan, iyo Dadka Midabbada (BIPOC) iyo farshaxankooda. Dhibaatooyinka jira ayaa si gaar ah ugu dhacay bulshooyinka BIPOC. Bulshooyinka Madow, Aasiya iyo Latinx ayaa sii wadaya in la seexiyo cisbitaalka COVID-19 iyadoo si aad ah uga sarreysa dadka cad. Intaa waxaa sii dheer, xiritaanka goobaha farshaxanka iyo joojinta dhacdooyinka qof-ahaaneed, farshaxan-yahannadu way lumiyeen dakhligoodii.
Eric J Jolly, Ph.D., madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee mu'asasada ayaa yiri "Intii lagu guda jiray waqtiyadii adkaa iyo qalalaasaha, fanaaniintu waxay safka hore uga jireen muujinta baahida bulshadayada ee isbedelka." “Kadib COVID-19 iyo wixii ka dambeeyay dilkii naxdinta lahaa ee George Floyd, fanaaniinta Minnesota ayaa sii waday dhaqankan. Waa lama huraan inaan codkooda ku xoojino anagoo ku taageerayna shaqadooda sida ay u xusayaan una xusaan xilligan. ”
Laba iyo toban ururo farshaxaneed oo aan macaash doon ahayn ayaa lagu casuumay Mu'asasada si ay u doortaan farshaxanno xubin ka ah kuwaas oo heli doona maalgelin ahaan kaqeybgalayaasha "Farshaxanka xilligan la joogo." Muddada lixda toddobaad ah, farshaxan-yahannadu waxay la wadaagi doonaan shaqo cusub ama horu-socod iyagoo adeegsanaya hashtag #ArtInThisMoment. Dhamaadka mashruuca, shaqadooda waa la diiwaangelin doonaa waxaana laga heli doonaa spmcf.org/art.
"Kala duwanaanta fanaaniinta iyo farshaxannimadu waa qurux, daandaansi, iyo layaab, laakiin layaab maleh, marka loo eego jawiga faneed ee hodanka ah ee aan ku haysanno Minnesota," ayay tiri Pamela Wheelock, madaxweynaha ku meel gaarka ah ee hay'adda McKnight Foundation. "Waan ku faraxsanahay inaan ku biirno xoogaga Saint Paul & Minnesota Foundation iyo fanaaniinta shaqadooda dhiiri galiya waxayna na siinayaan rajo aan ku qabno berrito cadaalad badan."
Ururada ka qeyb galaya waxaa ka mid ah:
Ururka Guryeynta Bulshada Hindida Mareykanka (AICHO)
Adigana Ma Dareemaysid
Aqoon isweydaarsiga Monkeybear ee Harmolodic
Xarunta Penumbra ee ku bogsiinta jinsiyada